Uyenza njani iAkhawunti yasimahla yeakhawunti inyathelo ngenyathelo | Iindaba zeGajethi
Uyenza njani iakhawunti ye-Outlook
Uyayikhumbula iminyaka yoMthunywa? Ngokuqinisekileyo ezinye iwaka leminyaka Awazi ukuba ndithetha ukuthini ngokusebenzisa igama "uMthunywa", kodwa kwiminyaka eyadlulayo bekukho into ebalaseleyo eyayiyi-MSN yeMicrosoft. Kananjalo kwiminyaka emininzi eyadlulayo ukusukela kumaxesha apho sonke sasine-imeyile ye-@hotmail, kodwa ukuba loo ndawo ingakhange igqithe ngendlela efanayo neyenye yazo, @live, kungokuqhubeka nokusebenzisa ithuba lokutsala. Ewe kunjalo, ukuba ngoku sifuna ukuba nayo i-akhawunti ye-imeyile Ukusuka kwiMicrosoft kufuneka sazi uyenza njani iakhawunti ye-Outlook.
Ukuqhubeka nenxalenye yembali, kwiminyaka eyadlulayo, i-Outlook yayiyiposi, ikhalenda kunye nesixhobo samanqaku, ngokungathi yayiyi-ajenda, eyabandakanywa nguMicrosoft ukusukela ngaphambi kokukhutshwa kweWindows 3.11. Emva kwexesha elide, ukufika kweGmail kubangele abasebenzisi abaninzi ukuba babeke ecaleni izindululo zikaMicrosoft kwaye baqale ukusebenzisa iGoogle, ke inkampani eqhuba nguSatya Nadella ngoku igqibe kwelokuba iphakamise ubuso babo. Iziphumo sele ziyaziwa: I-Skype ithathe indawo yoMyalezo kunye ne-Outlook yi "hotmail entsha." Kule nqaku siza kuchaza iindaba ezaziswa nguMicrosoft xa esenza iinguqulelo zamva nje kwaye okona kubaluleke kakhulu, uya kufunda ukwenza iakhawunti kwi-Outlook simahla.
1 Uyenza njani iakhawunti kwi-Outlook yasimahla
2 Imenyu yokhetho lwe-Outlook
3 Ungayicima njani iAkhawunti yokujonga
Uyenza njani iakhawunti kwi-Outlook yasimahla
Ngokusengqiqweni, yakuba iHotmail inyamalale, kuya kufuneka singene kwinkonzo entsha kwelinye iphepha lewebhu. Ukuthintela ukudideka, ndiza kunika iinkcukacha kumanyathelo ekufuneka elandelwe yenza iakhawunti kwi-Outlook:
Sinqakraza LONTO. Njengenye indlela, kwimeko yedilesi eguqukayo, unokufikelela kwi-outlook.com kwaye ufake ibhokisi yeposi.
Sibeka igama lethu nefani *.
Apha ngezantsi kwebhokisi "yegama lomsebenzisi", cofa ku "Fumana idilesi entsha ye-imeyile."
Ukuba sinqwenela, sitshintsha idomain, esinokuthi sikhethe yona es (ukuba uyayenza isuka eSpain), outlook.com o hotmail.com.
Sifaka iphasiwedi esiza kuyifumana ngayo iakhawunti esiza kuyenza, kanye ukuyilungisa kunye nexesha lesibini ukuyenza
Sikwazisa ilizwe lethu okanye ingingqi *, umhla wokuzalwa * kunye nesini *.
Kuya kufuneka siqwalasele indlela yokufumana kwakhona iphasiwedi. Ndincoma ukusebenzisa enye idilesi ye-imeyile ukuthintela ukukunika inombolo yethu yefowuni. Ewe kunjalo, ukuba ufuna ukucima iakhawunti okanye ukuyifumana kwakhona ngenxa yokulahleka kwephasiwedi, kuya kufuneka usebenzise i-imeyile okanye ifowuni yokwenyani.
Ngoku kufuneka siqinisekise ukuba asiyirobhothi, ke siza kubhala isicatshulwa esisibona kumfanekiso osebhokisini. Sinokhetho lokutshintsha kwisandi ukuba kukho imfuneko.
Singavumela izithembiso zentengiso ukuba zithunyelwe kuthi, kodwa ndincoma UKUNGAJONGI loo bhokisi. Ndihlala ndicinga ukuba xa ndifuna into, ndiza kuyikhathalela ndiyikhangele. Andifuni nayiphi na imeyile engacelwanga.
Sinqakraza «Yenza iakhawunti».
Ngoku nqakraza kwibhokisi enebhokisi ezisithoba emva koko kwi-Outlook.
Okokugqibela, sibonisa ulwimi lwethu, izowuni yethu yexesha kwaye ucofe ku "Gcina".
(*) Akukho mfuneko yokubeka idatha yokwenyani.
Njengoko ubona, yiyo loo nto ndibize iGmail ngaphambili, ifayile ye- Imbonakalo ye-Outlook iphucule kakhulu xa kuthelekiswa ne-Hotmail endala kwaye inomdla kakhulu. Kwicala lasekhohlo sine-Inbox, Spam folda (ezinokhetho lokungabhalisi ukuba abanye abathengi be-imeyile abanazo), iiDrafti, izinto ezithunyelweyo kunye nezinto ezisusiweyo, kunye nabafowunelwa beSkype. Ukuba sifuna ukwenza incwadi eneenkcukacha, sihamba ngaphezulu kokubhaliweyo "Iifolda", sicofa uphawu lokudibanisa oluvela (+) kwaye sibeka igama kwibhokisi eza kubonakala ngezantsi kweefolda ezikhoyo. Ukusuka "Entsha", sinokwenza i-imeyile okanye, ukuba sicofa utolo oluncinci, umcimbi wekhalenda.
Imenyu yokhetho lwe-Outlook
Ukusuka kwimenyu yokukhetha i-Outlok esinayo:
Uhlaziyo, ukuvuselela imiyalezo.
Impendulo ezenzekelayo. Ngexesha lokubhalwa kwale posi, ayisebenzi, kodwa iya kusebenza ukuphendula ii-imeyile kuthi (andiyithandi tu le).
Useto lwescreen Iya kusinceda siqwalasele indlela esifuna ukuyibona ngayo inbox.
Lawula iiplagi, ukulawula ezinye iinkonzo zeMicrosoft.
Qwalasela ngaphandle kweintanethi, ukuze sikwazi ukusebenzisa izixhobo xa singekhoyo kwi-intanethi.
Guqula umxholo, Ndicinga ukuba oku kucacile. Kukutshintsha umxholo webhokisi yethu yebhokisi engenayo kunye nezinye iinkonzo.
Khetha, ukubona zonke iinketho ze-Outlook kunye nezinye iinkonzo zeMicrosoft. Akukho nto inxulumene neakhawunti yeMicrosoft emiselweyo apha.
Ukuba into esiyifunayo kukutshintsha umfanekiso weprofayile yethu, kuya kufuneka ucofe i icon ngasekunene, ukhethe u "Hlela iprofayili" kwaye ucofe ku Guqula umfanekiso, ukusuka apho sinokukhetha khona ifoto yethu kwaye siyilayishe.
Ungayicima njani iAkhawunti yokujonga
Ukuba, nangasiphi na isizathu, uthatha isigqibo sokuba awusafuni ukusebenzisa iakhawunti yakho ye-Outlook, kuyakufuneka uyivale yonke iakhawunti, ngoku asiyi kuba nakho ukufikelela kuzo naziphi na iinkonzo zika-Microsoft ukusukela kuloo akhawunti. Ukuba yile nto uyifunayo, kuya kufuneka ulandele la manyathelo.
Masiye kwikhonkco le Vala iakhawunti.
Ukuba sicelwe ukuba singene okanye siqinisekise iakhawunti yethu, silandela imiyalelo.
Uya kusicela ukuba sibonise ukuba singabo. Ukuba sibeka i-imeyile, kufuneka sibonise ukuba yeyiphi i-imeyile yesibini esiyiqwalaselayo. Ukuba ibiyifowuni, siza kukuxelela kwaye baya kusithumela ikhowudi ngefowuni.
Inyathelo elilandelayo iya kuba kukujonga oko basithumele kona kwaye bangenise ikhowudi (endingenakuyenza kuba iakhawunti ye-imeyile endiyilungiselele esi sikhokelo ibiyinyani. Izinto "zisuka ngqo".).
Kuluhlu olwehlayo "Khetha isizathu", sikhetha isizathu sokuba kutheni sifuna ukuvala iakhawunti. Ukuba asifuni ukuchitha ixesha, sinokukhetha enye ngokungacwangciswanga.
Okokugqibela, iyakusisa kwifestile entsha apho kuya kufuneka siqinisekise ukuba sifuna ukucima iakhawunti yethu ngokunqakraza ku "Phawula iakhawunti ukuvala".
Ngaba unemibuzo malunga nayo Uyenza njani iAkhawunti yokujonga?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyenza njani iakhawunti ye-Outlook
umaker javier zambrano sitsho
Phendula kwi-maiker javier zambrano
Iingcebiso ezi-6 zokufumana okanye zokuphucula ukhuseleko lwakho
Ungabusindisa njani ubomi be-smartphone yakho xa sele imanzi